Mayelana NATHI - Shijiazhuang Changhong Building Decoration Engineering Co., Ltd
IShijiazhuang Changhong Building Decoration Engineering Co., Ltd
Changhong eyasungulwa ngo-1992 elise Shijiazhuang Hebei China, eduze Beijing.
I-Changhong inikela ngezinsizakalo ezihlukanisiwe zesitolo zamabhizinisi emikhiqizo, Ukuze ube yisithunywa sobuhle futhi umdali wendawo yebhizinisi eluhlaza umbono wethu.
Inhlonipho, ubuqotho, isibopho, ukuqamba izinto ezintsha, ukuzijwayeza kanye nokubambisana kuyizindinganiso zethu eziyinhloko.
Emakethe yaseChina, i-CH igxile ekwenzeni insizakalo eyodwa yezitolo ezitolo, kufaka phakathi ukwakhiwa, ukwenziwa, ukwenziwa kwezinto, ukwakha, ngemuva kwensizakalo nensizakalo yesondlo
Ifektri yethu ingamamitha-skwele angama-42,000, inendawo yokusebenzela yezinkuni, i-workshop yensimbi kanye ne-workshop yepulasitiki, i-workshop yokudweba kanye ne-powder yokumboza i-workshop.
Futhi nginezixhobo zokukhiqiza ezithuthukile njengePaneli Yokuhlukanisa I-Saw, Umshini Wokwakha i-CNC nge-AL + UL, Umshini Wokubhoboza ohlangothini lwe-CNC, i-CNC Point ukukhomba isikhungo semishini yokubhola. Imikhiqizo yethu ithunyelwe emazweni angama-30, futhi amaklayenti anelisekile kithi. Uyemukelwa ukusivakashela kanye nophenyo, siyajabula ukukunikeza insiza yethu enhle kakhulu.
Naka umphakathi, yenze nhle imvelo, ukhuthaze okuluhlaza, futhi wenze njengomklami wobuhle. Ukuthatha ezomnotho, ezinhle, zokonga ugesi kanye nokuvikelwa kwemvelo njengokuqondiswa komklamo we-CH nomgomo wokumba nokunweba izinga elijulile lesikhala sokuklama
Umhlangano wento nokusatshalaliswa konke kutholakala kuncike ku-R & D nesisekelo sokukhiqiza.
Izikhungo zokukhiqiza ezi-6, isikhungo ngasinye sihlinzekwa ngemigqa eminingi yokukhiqiza okuzenzakalelayo neyokuzenzakalelayo, futhi ingahlela ukukhiqizwa ngokuguquguqukayo ngokuya ngevolumu ye-oda leklayenti.
Sihlela ikakhulukazi insizakalo ekhethekile yenkatho encane nemodi yokukhiqiza ye-oda elenziwe ngezifiso, ukuhlangabezana nokufunwa kwe-oda elithile nokuhleleka okuncane kweklayenti.
Inqubo yokugeleza nokusebenza kwegatsha ingenzelwa izinsiza eziningi.
Ukuhlinzeka ngezidingo ezisheshayo, ezahlukahlukene nezomuntu siqu zamakhasimende
I-CH ihlinzekwa ngohlelo lokuphathwa kwemodemu yesitoreji semodemu, futhi ibona ukuphathwa okuhlelekile kwesikhathi sangempela nokubukwayo kokuthengwa komkhiqizo, ukumaketha, ukugcinwa, kanye nokulandelwa kokuthuthwa kwempahla ngosizo lwe-bar code kanye ne-wireless phaser information technology. Okwamanje, iklayenti lingabuza ukusayinwa kwezokuthutha kanye nokutholwa kwemikhiqizo ngesikhathi sangempela ngemishini yokugcina ngokuya ngenombolo ye-oda ehambisanayo.
Isikhungo se-logistics siqukethe iminyango emithathu: umnyango othumelayo, umnyango wezokugcina kanye nomnyango wezokuthutha, onendawo yokugcina amamitha-skwele ayi-11000, kufaka phakathi ama-5000 square metres of warehouse emaphakathi kanye nezinqolobane zamagatsha ezingama-25. Umthamo wesitoreji uphuma ezweni lonke futhi unganikeza amakhasimende izinsizakalo zokusabalalisa nezokuthutha ezweni lonke.
Esikhathini esizayo, sizo "lungisa ukuhlela ulwazi, ngesikhathi esifanele; Sizinciphisa kanjani izindleko futhi sithuthukise ukuncintisana kwemikhiqizo; Sihlinzeka ngemininingwane yokuhlela kuzwelonke esezingeni eliphakeme futhi esebenza kahle, senze ukusatshalaliswa kwempahla kuvikeleke kakhulu, silandele yonke inqubo futhi sithuthukise" njenge umgomo oyinhloko, ukuthuthukisa njalo ukuncintisana kwabaphathi, ukuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo zokugcina izimpahla kanye nezinsizakalo eziphelele, futhi kubeke isisekelo esiqinile senkonzo ye-CH "eyodwa-stop"
Ngokumboza amahhovisi egatsha ezifundeni ezahlukahlukene, sihlanganisa izinsizakusebenza ezisezingeni eliphakeme ezindaweni zasendaweni futhi senze izimpendulo ezisheshayo ekwaneliseni ngokunembile izidingo zamakhasimende zokwakha izitolo.
Amahhovisi egatsha angama-30 + ezweni lonke
Izinsuku eziyi-17 ukuqedela isitolo
Izinsuku ezi-5 zokuqedela isitolo esisesitolo
Amathimba wokwakha olayini wokuqala angama-200
Ukuphendula ngamahora ama-3
7x24 online emva-sales service
I-CH iyanelisa izidingo zokugcinwa kwamakhasimende ethu endaweni yokuthengisa (izinsiza, okokusebenza, okokusebenza, izindaba zezitolo njll) ngemuva kokwakhiwa kwesitolo futhi inikeze nokuphathwa okuhambisanayo okuhambisanayo.